DAAWO: Shirka Maalgashiga Puntland, Caqabadaha & Fursadaha horyaala.
GAROOWE(P-TIMES) – Puntland ayaa qabatay kulanka Maalgashiga Caalamiga ah oo ay ka qeybgalayaan ganacsato kala duwan, kaas oo ka bilowday shalay magaalada Garoowe, waxaana madasha lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka, gaar ahaana xagga Badda oo wax badan laga soo bandhigay.
Shirkan ayaa socon doonaa tan iyo berrito, waxaana lafilayaa in ay dhamaadka ka soo baxaan Shirkado Maalgashi ku yabooha in ay Puntland ka furan doonaan, iyadoo ay tahay talaabo aan horey looga qaadin Soomaaliya.
Shirkadaha ganacsiga ee kusugan gudaha Soomaaliya qaar kamid ah ayaa qaaday talaabo ku wajahan in ay Maalgashi wanaagsan kafulin doonaan gudaha mandiqada Puntland, gaar ahaana Shirkadaha Baabuurta ee gaarka ah ayaa sheegay in ay xarumo keeni doonaan Garoowe.
Laakiin, caqabadaha jira waxaa kamid ah Sharciga Maalgashiga oo aan wali si toos ah loo ansixin, sidaas oo kale ogolaansho ayay shirkaduhu uga baahan yihiin dhinaca dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana muuqata in uusan xariirka labada dhinac wanaagsaneyn.
Daahfurnaanta Heshiisyada la galayo ayaa la rumeysan in ay bilow u noqon doonaan jihada maalgashigan ee guusha ama guuldaradda, dad badan ayaana rumeysan in Xukuumadda looga baahan yahay Daahfurnaan mashaariicda la xariirta.
Inta badan Musuqmaasuqa ayaa meel sare ka jooga Soomaaliya oo dhan, mandiqada Puntlandna dhawaan Hanti Dhawrihii hore ee Puntland ayaa u cadeeyey baarlamaanka in la musuqmaasuqay oo la dhacay wax ka badan 50% Miisaaniyadii dawladda sannadkii 2018-kii, waxaana aan wali la ansixin Xisaabxirkii maaliyadda ee sannadkaas oo baarlamaanku diideen.
Ka sokow arrimahan, haddana Puntland ayaa xooga saaraysa taabagalinta qorshaheeda ku wajahan arrimahan oo ay doonayso in ay meelmar ka dhigto in ay Shirkado Ajaaniib ah maalgashi sameeyaan.
Ganacsato badan oo la casumay qaarkood ayaa imaanin kulanka, sidda ay ogaatay PUNTLANDTIMES, waxayna sheegeen in ay uga cududaarteen guddiga qabanqaabada qaarkood saacadihii u dambeeyey ee maalmaha qabsoomida kulanka Maalgashiga ee Puntland.